abalandeli bayifuna ikwamasipala namuhla imeya - Ilanga News
Home Izindaba abalandeli bayifuna ikwamasipala namuhla imeya
abalandeli bayifuna ikwamasipala namuhla imeya
BAFUNGA bayagomela abalandeli beMeya yeTheku ebihlabe
ikhefu, uNkk Zandile Gumede, ukuthi bazombuyisela namuhla ngoLwesine emsebenzini yize iqembu lakhe i-ANC, lizwakalise ukuthi lilindele ukuba azelule izinsuku zakhe zekhefu.
Lokhu kuvezwe nguMnu Mzomuhle Dube ongomunye wabahola abalandeli bakaNkk Gumede emuva kokuba i-ANC imemezele ukuthi ilindele ukuba imeya iqhubeke nekhefu layo, kuze kube uKhongolose uthatha isinqumo ngophenyo. UMnu Dube usho lokhu nje, kuzokhumbuleka ukuthi izinsuku zekhefu ebelithathwe nguNkk Gumede seziphelile, kanti bekulindeleke ukuba ayoqala emsebenzini namuhla.
UNobhala we-ANC KwaZulu-Natal, uMnu Mdumiseni Ntuli, ucashunwe ethi balindele ukuba amaqabane abethathe ikhefu, aqhubeke nalo kuze kube
kuthathwa isinqumo. Uphinde waveza nokuthi uphenyo olwenziwa yiTask Team, seluzophela kanti luzocutshungulwa emhlanganweni olandelayo wePWC ozoba ngasekupheleni kukaNtulikazi (July).
Kuzokhumbuleka ukuthi uNkk Gumede ungaphandle ngebheyili ka-R50 000 ecaleni abhekene nalo lenkohlakalo ehlanganisa ukukhi-shwa kwethenda yokuqoqa udoti ka-R208 million. Kakuyena nje kuphela obethathe ikhefu, kodwa naloyo oyimeya yaseNewcastle, uMnu Ntuthuko Mahlaba, naye ubehlabe ikhefu emuva kokuphuma ngebheyili ecaleni abhekene nalo lokubulawa kuka-Mnu Wandile Manqasha Ngobeni.
UMnu Dube uthe nakanjani namuhla bayofaka uNkk Gumede ehhovisi lakhe kwamasipala
weTheku. “Sizoba nomthandazo (obuyizolo ebusuku) lapho sizohlala khona kuze kuse ekuseni, bese siya-mphelezela uNkk Gumede ukuba abuyele emsebenzini wakhe ngoba kasikho vele isinqumo esithathiwe.
“Naphambilini sasivele sishilo ukuthi lokhu akukho emthethwe-ni njengoba namanje singekho
“Kusasa (namuhla) sizobe simphelezela ukuyoqala umsebe-nzi wakhe ngoba phela seziphelile izinsuku zekhefu abecelwe ukuba alithathe,” kusho yena.
UMnu Mdu Nkosi, omele i-IFP kulo masipala, uthe i-ANC kufana nokuthi iyizahluleki njengoba ingaphumeli obala odabeni lukaNkk Gumede.
Uthi njengoba abantu abalandela uNkk Gumede bethi bazomfaka emsebenzini ngenkani, lokhu kusho ukuqhubeka kokuphaza-miseka kokuhanjiswa kwentuthuko emphakathini, kuphinde
“Kuyefana nokuthi i-ANC iyiza-hluleki ngoba vele kwakumele imsuse esikhundleni sokuba yimeya, ingamyaleli ukuba athathe ikhefu ngoba yinto engekho leyo.
ngibhalele uMnu Sihle Zikalala incwadi ngimbonisa ukuthi
kungakuhle athole abaphenyi
abazimele kulolu daba lwakaDSW, ukuze konke kuzovela obala
kungabi bikho okufihlwayo. Namanje leyo ncwadi akakaze ayiphendule uMnu Zikalala.
“Lezi zinkinga ze-ANC zenza umonakalo omkhulu ekuhanjiswe-ni kwezidingo emphakathini. Ngisho imenenja kamasipala seyiphenduke ufakazi wombuso okusho ukuthi kuningi ekwaziyo futhi kakusekho nokwethembana, yingakho sibona kungcono ukuba uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu, uMnu Sipho Hlomuka, afake lo masipala ngaphansi komlawuli,” kusho yena.
Previous articleUdonswe ngendlebe osinde ezembeni
Next articleIngane itholakale kwi-trunk seyonakele